Shina Jinan Sale 2 Spindles mihodina miasa hazo lathe milina ho an'ny latabatra tongotra tohatra mpanamboatra sy mpamatsy |fara tampon'ny
Varotra Jinan 2 Spindles mamadika milina lathe hazo miasa ho an'ny tohatra tongotra latabatra
APEX Brand cnc lathe hazo manana modely samy hafa, toy ny APEX15016,fara tampon'ny15030,fara tampon'ny20030,fara tampon'ny30030etc.ny habe azo namboarina, manolotra 2 taona fiantohana, ny fiainana manontolo fanohanana ara-teknika.
Ho an'ny fiaraha-miasa voalohany, dia hanampy amin'ny famahana ireo olana etsy ambany izahay, toy ny fisafidianana milina ara-toekarena nefa avo lenta, vidin'ny fandefasana, saram-pandraharahana fanafarana, ny olana aorian'ny fivarotana, fanohanana ara-teknika sns.
2 Spindles Mihodina miasa Wood Lathe Machine dia fitaovana miaraka amin'ny axe roa hanodinana tohatra, balusters tohatra, tohatra vaovao tohatra, tongotra latabatra, tongotra seza, lalamby fandriana, ramanavy baseball, sns.lathe hazoamidy amin'ny vidiny mora.
Endri-javatra amin'ny CNC mandeha ho azylathe hazomilina
1. Ny vatan'ny milina lathe manontolo dia natsipy vy, izay fanalefahana ny mari-pana ambony sy fanalefahana ny adin-tsaina mihozongozona, ka ny vatana lathe dia miorina ary tsy ho simba mandrakizay.
2. Ny milina lathe hazo dia fitaovana amin'ny 2pcs spindles ho an'ny manodina, grooving, slotting, sns.
3. Ny lathe hazo dia mampiasa rafitra DSP mandroso miaraka amin'ny fifandraisana USB, miasa miaraka amin'ny tahony, miasa mety.Ny lathe dia afaka miasa tanteraka tsy an-tserasera ary tsy maka loharanon-karena amin'ny solosaina.
4. Ny lathe hazo dia mampiasa visy baolina any Alemaina sy Taiwan PMI helical square guide rail miaraka amin'ny fampandehanana avo lenta sy maharitra.Bid module helical/diagonal rack.
5. Mifanaraka amin'ny rindrambaiko famolavolana CAD/CAM maromaro: type3, artcam, sns.
6. Ny hafainganam-pandehan'ny fihodinana dia amboarina amin'ny alàlan'ny inverter, ary ny angon-drakitra haingana dia aseho amin'ny fanaraha-maso ny kabinetra tontonana.
7. Fametrahana fitaovana indray mandeha mba hamita ny asa manontolo.
8. Double axis afaka miasa avo roa heny fahombiazana, miaraka amin'ny 4 pcs hazo lathe cutter mahatonga ny fanapahana hazo malama kokoa sy mafy orina.
9. Fomba fifindran'ny fitaovam-pitaterana helika, izay mahatonga ny hafainganam-pandehan'ny asa ambony kokoa, ary miaraka amin'ny enta-mavesatra ambony kokoa, ny fandehanana milamina ary ny tabataba ambany kokoa.
Parametera ara-teknika amin'ny milina fametahana hazo CNC mandeha ho azy
Max halavan'ny fanodinana 1500mm (2000mm/2500mm/3000mm raha safidy)
Herin'aratra AC 380V 3 phase 50HZ/60HZ (220V ho an'ny safidy)
Max tahan'ny famahanana 200cm/min
Unit fandrindrana min 0,01 sm
Karazana fampitaovana ballscrew ho an'ny XZ axis, fitaovana ho an'ny Y axis
Mpitarika Taiwan Hiwin orbit
Hafainganam-pihodinana lehibe 0-3000r/min
Spindle maotera 3.5kw rivotra mangatsiaka spindle
Rafitra fanaraha-maso DSP rafitra fanaraha-maso
maotera Stepper maotera
Driver mpamily Yako
Inverter Inverter tsara indrindra
Ny fanaraha-maso tanana dia mahafantatra ny format rakitra *.dxf
Fizarana azo atao ho an'ny milina CNC Wood Lathe
1. Axe rotary bebe kokoa.
3. Fitakiana hery samihafa.
4. Manatsara ny fanaraha-maso.
5. Servo maotera.
6. Lehibe kokoa miasa savaivony sy ny halavany, sns.
Spindle roa ho an'ny milina CNC Wood Lathe
Fampiharana ny milina mandeha ho azy CNC Wood Lathe
Ny milina lathe hazo dia ampiasaina indrindra amin'ny tohatra, balusters tohatra, tohatra vaovao tohatra, tongotra latabatra fisakafoana, tongotra latabatra faran'ny tongotra, tongotra latabatra sofa, tongotra seza, tongotra seza, tohatra sandry seza, tohatra seza, lalamby fandriana, andrin-jiro, baseball ramanavy, tantana kifafa hazo, sns.
Tetikasa milina fametahana hazo CNC mandeha ho azy
2021 Best Fibre Laser Engraver miaraka amin'ny Enclos feno ...
Loha roa CNC Router hazo sokitra fanaka Mak ...
Hazo mihodina tokana famaky iray spindle lathe mach...
High Quality Fibre Laser Marker ho an'ny solomaso sy...